Wararkii ugu dambeeyey qaraxii xoogana ee maanta ka dhacay Nairobi+Sawiro – SBC
Wararkii ugu dambeeyey qaraxii xoogana ee maanta ka dhacay Nairobi+Sawiro
Warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo maanta ka dhacay bartamaha magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, kaasi oo la xaqiijiyey in uu geystey khasaare kala duwan oo isagu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hanti.
Qaraxa ayaa ka dhacay wadada mashquulka badan ee Moi Avenue ee bartamaha magaalada Nairobi, ilaa iyo hada 28 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen qaraxan, iyadoo sidoo kale la soo sheegayo dhimashada hal qof.
Qaraxa ayaa ka dhacay Dukaan halkaasi ku yaal, iyadoo warar is khilaafsan ay ka soo baxayaan sababaha qaraxan, inkastoo qiiq iyo uuro xoogan uu hawada u diray qaraxan.
Booliiska & Xukuumada oo siyaabo kala duwan uga hadley qaraxa
waxyeeloobeen qaraxan, waxaana halkaasi ku yaacay kooxaha gurmadka, gawaarida dhaawaca lagu daabulo iyo cutubyo ka tirsan ciidamada Booliiska.
Saraakiil ka tirsan Booliiska Kenya ayaa goor sii horeysay sheegay in qaraxu uu ka dhashay Koronto, isla markaana aanay ka helin goobtii qaraxu ka dhacay wax muujinaysa in qaraxaasi uu ahaa bam ama raad ku lug leh waxyaabaha qaraxa.
Laakiin Ra’isalwasaaraha Kenya Raila Odinga ayaa qaraxan ku macneeyey “Fal cadowtinimo ah”, taasi oo uula jeedo in uu ahaa mu’amarad la soo maleegay, isagoo booqanayey goobtii qaraxu ka dhacay ayuu yiri “Waxay doonayaan inay na cabsi galiyaan, laakiin cabsan mayno”
“Waxay doonayaan inay cabsi galiyaan maalgaliyaasheena, waxay doonayaan inay cabsi galiyaan dalxiisayaasha, waynu cambaareynaynaa argagixisada, una sheega maalmahoodii inay yihiin kuwa tirsan” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Odinga oo doonaya in uu sanadka dambe doorashooyinka dalkaasi ka dhacaya isku sharaxo madaxweynaha Kenya.
Inkastoo Ra’isalwasaare Odinga uu hadalkaasi jeediyey hadana sarkaal ka tirsan xukuumada oo lagu magacaabo Orwa Ojode ahna wasiir kuxigeenka arimaha gudaha ayaa yiri “way dhici kartaa weerarkan inaanu aheyn fal argagixiso, waxaa dhici karta in cilad ka dhalatey fiilooyinka korontada ay tahay.
Qof Soomaali ama Carab u muuqaal la’eg oo laga shaki qabo
Wakaalada wararka The Associated Press (AP) ayaa ka soo xigatey qof goob jooge u ahaa qaraxaasi in qof muuqaalkiisu ekaa Soomaali ama Carab uu ka dambeeyey qaraxaasi.
Goobjoogaha oo lagu magacaabo Irene Wachira oo AP la hadley wuxuu sheegay in ninkaasi uu sadex jeer dukaanka ku soo laabtey isagoo iska dhigaya in uu wax iibsanayo, iyadoo markii dambe uu meesha la yimid boorso markii uu tageyna uu qaraxu dhacay.
Laakiin Dhakhar ayaa u sheegay AP in qof ku soo dhaawacmay qaraxa uu ka soo xigtey in qof muuqaal Soomaali leh uu goobta qaraxu ka dhacay uga tagey Boorso.
Dhaawacyada gubasho & jab ayaa ka muuqda
Thomas Mutie oo ka mid ah maamulka Kenyatta National Hospital ayaa sheegay in la soo gaarsiiyey dhaawaca 28 qof, wuxuu sheegay in dadka dhaawaca ah badankoodu ay qabaan dhaawacyo dab ama gubasho, jab iyo dhaawacyo jirka ah oo ay sababeen muraayado, balse wuxuu sheegay inaanay u muuqan in biro ay sababeen dhaawaca.
Walaalaha is dhaarsaday.dhiigiina dahabka ah.dhibicda uhoraysaa.goortay dhacdaabaa.denbigii ladhaqayaa.su.aaldhiiban maayoo ogin waa jihaad dhaba.dhalanteed aduunyadu.imtaxaan ladhigayoo.natiijada la dhowriyo.dhixid maalma weeyaan.dhamays how malaynina.inaad dhabar adaygtaan .dharaar iyo habeenaba.dhufaysyada adkaysaan.miinada dhegaha fudud.dhabbayaasha gelisaan.kuwa nolosha dhow iyo.dhalanteedka dunidiyo.dhaqaalaha aduunkiyo.doortay dheriga maalmeed.ku dhardhaara baaruud.kuwa diinta dhaawacay.dhaqankiyo codkeena leh.dhinac taagan gaalada.kadheereeya naxariis.dhuuniqaatayaashaa afrikaanta dharaqsada.dhaafay hadalka eebiyo diintaa dhamaystiran.dhoodhoobka gaalada.dimoqraadi dhaxalsaday.dhood iyo is yeel yeel.isku dhererin gaalada.kanaa aniga iidhow.yaan ehela loodhugan.dhafoorkiyo wadnaha iyo.beerkaa dhexyaalka ah.dhag ku siiya shiishkii.markay rubadu dhaaftana ilaahuu ku dheelaa.jahanama udhigayee.
run ahaanti wadadan waxan maraa maalinkasta 2 jeer, maantayna meel u muuqata ayaan joogay oo ah geeska wadada moi avenue ee qaraxa ka dhacay
xaqiiqada hadii laga hadlo waxa meesha ka dhacay ma aysan ahay qarax ee wuxuu ahaa electric fault ama cillad ka timi koronto khaldantay